Ihe mere B2B gị ji achọ usoro ịdọ aka na ntị oge | Martech Zone
Ihe kpatara B2B gị ji achọ usoro ịdọ aka na ntị oge
Tuesday, January 6, 2015 Mike Ejekwu
Okwu a ị maara, i tufuo metụtara ozugbo na ahia, ma ọ dị mwute ikwu na ọ bụghị ọtụtụ ndị na-ere ahịa yiri ka ha ghọtara nke a. Ọtụtụ mgbe, ha na-echere ruo oge ikpeazụ iji mụta banyere atụmanya bara uru ma ọ bụ onye ahịa nke nọ n'isi nso ịhapụ, na igbu oge ndị a nwere ike ịmetụta mmetụta nke otu nzukọ. Onye ọ bụla B2B marketer chọrọ ihe usoro ịdọ aka na ntị mbụ nke ahụ na-enyere aka na-eduga na nsonaazụ.
Ndị na-ere ahịa oge a na-atụle ọganiihu mkpọsa site na mmechi emeri ma ọ bụ site na nnọchi nnọchi anya, dị ka Ahịa ruru eru na-eduga (SQLs). Nsogbu nke a bụ 4-okpukpu. Iji malite, ya eleghara anya na n'okpuru akụkọ na-etinye ndị ọrụ aka ndị na-achọghị ikwu okwu na Ahịa. Ndị a bụ atụmanya nke na-ahọrọ inweta ozi ha na-ejere onwe ha ozi karịa ka ndị na-ere ahịa zigara ha ya. N'ihi ọtụtụ ihe ọmụma dị na ,ntanetị, ọnụ ọgụgụ nke atụmanya nke ọdịmma onwe onye na-arị elu. Google choputara na ndị na-azụ ahịa anaghị akpọtụrụ ndị na-eweta ngwaahịa ozugbo ruo mgbe 57 pasent nke usoro ịzụta zuru ezu. Enweghị ike ileghara ndị ahịa a anya. Gụnyere sava onwe gị na nyocha mkpọsa gị ga-enye nkọwa ziri ezi nke arụmọrụ mkpọsa.
Nke abuo, ilele ndu anya n'oge ire ahia na-eme ka ire ahia na-ele ikpe na omume nke ndị na-ere ahịa. Ndị otu ọ bụla nwere ike ọ gaghị achọ ịgbanwe ndu ma ọ bụrụ na ha ejighi n'aka na ọ bụ atụmanya na-ekpo ọkụ, n'ihi na atụmatụ ha bụ gbado anya na ahia kacha mma ma debe ọnụọgụ mgbanwe ha elu. Ndị ọzọ na-emegharị nwere ike ịme ihe megidere ma gbanwee ndu na-adị mfe, ma ọ bụ na ha na-eme ya oke, naanị mgbe ahịa zutere ya. Ọtụtụ nchigharị nwere ike ime ka mkpọsa bawanye uru, nke na-emetụta ebe ahịa na-ekenye ego ya n'ọdịnihu.
N'okwu abụọ ahụ, ọrịre ahịa na-akwụsị ahịa. Marketingzụ ahịa na-arụsi ọrụ ike ịmepụta ndu, a na-eleghara ha anya na njedebe nke nkeji iri na ise ka ahịa na-elekwasị anya na mmechi mmechi, ndị na-eduga na-aga n'ihu. Nke a bụ ebe amaara ama ama na mmekọrịta azụmaahịa.
Nsogbu nke ato a na-enwe n'ihe ịga nke ọma n'ụzọ dị otu a bụ nke ahụ ahia na-ekpughe ihe ndị nwere ike ime eme n'ọtụtụ usoro, gụnyere ịchụso ụzọ, ọkwa nke ahịa ahịa, izi ozi, wdg. Dịka ọmụmaatụ, ka anyị kwuo na ahịa na-agba nnukwu mkpọsa nke na-ebute nsonye siri ike na nnwale n'efu. Ọ bụrụ na ndị mmepe mmepe (SDR) anaghị arụ ezigbo ọrụ na-esote (yabụ ichere ogologo oge, izipu ozi ịntanetị na njehie nsụgharị, ma ọ bụ ịkparị ekwentị, wdg), ma ọ bụ enweghị ọhụụ iji hụ nsonaazụ ọma nke ikpe, mgbe ahụ, ọ nwere ike ịkwụsị ịkagbu, n'agbanyeghị arụmọrụ siri ike.
Ọ bụrụ na ndị SQL na-eduga na ọnụego ntụgharị, ndị na-ere ahịa kwesịrị ilekwasị anya na mbọ ha na-agbada n'ime olulu ahụ iji mechie azụmahịa ndị ọzọ. N'ikpeazụ, ịbịaru ụzọ na-abụkarị ikpe ziri ezi, yana isi ihe enyere maka atụmanya ịpị ozi ịntanetị, nbudata, na nleta na ibe weebụ. Kama ị nweta usoro mmụta sayensị, inye goolu na-abụkarị okwu amamịghe kachasị mma.
Na-eme ihe ngwa ngwa
Zọ kachasị mma iji mee ka omume nke atụmanya gị bụrụ ọrụ usoro ịdọ aka na ntị mbụ iji gwa gị ma mkpọsa gị ọ na-aga nke ọma. Enwere ike ịtụle nke a dabere na nnwale n'efu ma ọ bụ ndị debanyere aha freemium ndị na-eji ngwaahịa gị. N'ezie, ị ka chọrọ ịlele ma ha ga-abanye na SQL ma ọ bụ na-akwụ ndị ahịa ụgwọ, mana ilele metric a na-ekpughe pasent ole na ole atụmanya na-esonye na ngwaahịa gị na nke na-abụghị. Nke a dị mkpa, n'ihi na ndị na-ere ahịa kwesịrị ịma ozugbo ma mkpọsa ọ na-eweta ezigbo ụdị folks. N'ụzọ dị otú a, ha nwere ike ịkwụsị ma weghachite mkpọsa na-adịghị arụ ọrụ nke ọma tupu oge agafee.
Iji nweta ụdị visibiliti a, ịkwesịrị iji ngwaahịa gị rụọ ọrụ ka ịdekọ omume ndị ahịa wee kee nke ahụ na mkpọsa ha si. Kpọmkwem emepụta visibiliti a site na ịnakọta data a, ma jikọta ya na Salesforce ma ọ bụ usoro akpaaka ahịa dị ka Marketo na Hubspot, ya mere ndị ahịa nwere ike ịme ihe kachasị mma. Nke a pụtara na agaghị echere ọzọ ruo mgbe oge gafere iji banye.
Nkwado ndị ahịa bụ akụkụ dị oke egwu nke azụmaahịa ọ bụla, mana enwere ike iji ọtụtụ usoro ahụ iji hụ na atụmanya nwekwara ahụmịhe kachasị mma nke ngwaahịa gị. Anyị ịgakwuru ibelata ahịa churn bụkwa a dị ike ụzọ nlele n'oge n'oge ahịa okirikiri ma mkpọsa bụ ihe ịga nke ọma. Nke a na - eme ka ndị na - ere ahịa nghọta dị ukwuu banyere ROI nke mbọ ha, na - enye ha ike ka ha rụọ ọrụ.
Usoro ịdọ aka ná ntị mbụ
N'ebe ndị ọzọ, a na-eji usoro ịdọ aka ná ntị oge gbochie ọdachi. Ha na-ebute ọrịa tupu ha agbasaa, na-adọ ndị mmadụ aka ná ntị banyere ajọ ifufe na-abịanụ, ma ọ bụ na-achọpụta wayo tupu ya ebibi ajọ mbibi. Agbanyeghị, enwere ike iji usoro ịdọ aka na ntị oge gboo iji merie asọmpi ahụ ma nyefee ezigbo ROI. Ndị ahịa B2B agaghịzi atụkwasị obi na nghọta ma ọ bụ chere ruo mgbe ohere gafere. Data na nghọta banyere omume ndị ahịa na-enye ndị na-ere ahịa ume ịdị na-arụ ọrụ nke ọma, ma hụ na enweghị ụzọ bara uru gafere.
Tags: b2bahịa b2bemechi emechiịdọ aka ná ntị mbụusoro ịdọ aka na ntị mbụn'ịwa ndukpomkwemahịa ruru eruochie na-edugaịdọ aka ná ntị
Na-ahụ maka Ọganiihu Ndị Ahịa niile, Nkwado, Ọrụ, na Mmekọrịta na Kpọmkwem. Preact bụ igwe ojii na-eweta ihe ịga nke ọma nke ndị ahịa na-enyere ụlọ ọrụ ngwanrọ ndenye aha aka ka ọnụ ọgụgụ ndị ahịa baa ụba site na mbenata churn, inweta ndị ahịa akwụ ụgwọ ọhụrụ, na ịba ụba ego ndị ọrụ. Modelsdị usoro eji eme ihe na usoro omume site na iji nchịkọta data dị ukwuu, sayensị omume, na mmụta igwe.
The # 1 Ajụjụ Search Engine Users Jụọ Banyere Gị Business
Usoro 3 Teknụzụ nke ndị ahịa kwesịrị ilele na 2015